SARCOIDOSISUK 20 औं अन्वेषक
भू-तोड्ने अध्ययनको साथ हाम्रो अनुसन्धान कार्य मनाउने। हामीलाई उपचार पत्ता लगाउन मद्दत गर्नुहोस्।
हामीले आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेका छौं! - £ 63,000 भन्दा बढि बढ्यो
20 औं सालगिरह अभियान गर्दा, हामी एक महत्वाकांक्षा लक्ष्य निर्धारित गर्छौं £60,000. हाम्रो सबै समर्थकहरूको सहयोगको साथ हामी थोरै थियौं र धेरैजना गर्व गर्थ्यौं, जुन £ 63,000 भन्दा बढि बढ्दै गयो। हामी पहिले नै दान को दुग्ध हुन को लागी व्यवस्थित गरिएको छ, जसको अर्थ अब हामी समाप्त भएको छ £ 120,000 एक उपचारको लागि अनुसन्धानमा लगानी गर्न, सम्भावित जीवन बिताउने कोष एमटीआर अनुसन्धान.
यद्यपि, अभियानको साथ पनि सफलताको अन्त्यमा, हामीले अत्याधुनिक कार्य जारी राख्नका लागि हामीले दानलाई पनि आवश्यक छ जुन हामी दानमा गर्छौँ। त्यसैले कृपया सरकोडोसिस को दान गर्नुहोस्। प्रत्येक दानले मद्दत गर्दछ।
हाम्रो आधिकारिक जस्टाइभिंग अभियान पृष्ठमा जानुहोस् र अनलाइन दान गर्नुहोस् आज। एकसाथ, हामी सरकोडोसिसलाई पराजित गर्न सक्छौं।
हाम्रो जमीन-नयाँ अध्ययन तोड्दै: एमटीओआर
प्रकृति इम्यूनोलोजी जर्नल अनुसन्धानको एक महत्वपूर्ण टुक्रा प्रकाशित वियना विश्वविद्यालय बाट। तिनीहरूले थाहा पाएका छन् कि "माउस" मा स्विच गर्दा, एक माउस मा स्वाभाविक रूप देखि प्रोटीन, दि्छ कि माउस सरकोडोसिस। उत्साहपूर्वक मानव एमटीओआर ब्लकर्सहरू अनुमोदित छन्। यसैले हामी रिसर्च कोष गर्न चाहन्छौं कि मानिसहरु मा एम.टी.ओ.ए.आर.ओ. लाई स्विच गर्न को लागी बदले मा सरकोडोसिस बन्द गर्दछ।
सफल भएमा, यसले सरकोडोसिसको लागि संसारको पहिलो उपचार प्रदान गर्नेछ।
किन यो महत्त्वपूर्ण छ
कुनै प्रकारको उपचारको साथ सरकोडोसिस एक कम अनुसन्धान रोग हो। रोगीहरूले उनीहरूका लक्षणहरू आशामा पाएको छ कि रोगलाई छूटमा जान्छ; तथापि, 20-30% मामलाहरुमा यो पुरानो हुन्छ र 5% मा यो टर्मिनल हो।
1 सय 10,000 मा सर्कोडोसिस प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसको मतलब लगभग एक मिलियन व्यक्ति बीमारी बाट पीडित छन् जुन ज्ञात उपचार संग।
हाम्रो अनुसन्धानको महत्त्व र चासो हामीले सर्कोडोसिसबाट मरेको नाममा प्राप्त गरेका दानहरूको तीव्र ध्यानमा राखिएको छ। 1 सरकोडोसिसको सबै दान को 1 मध्ये 1 को अंतिम संस्कार प्लेटहरू वा मेमोरीम दानमा छन्।
दान थर्मामीटर प्लगइन प्रयोग गरी सिर्जना गर्नुहोस् https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/।£63,614£63,614100%
जेम्स मिलबर्न,92 9, अनियमित कार्डिएसी सरकोडोसिसको मृत्यु भयो। उनको आमा, मुकदमा 8,500 पाउन्ड भन्दा बढी अनुसन्धानको लागि उठाउनुभयो। हामी आशा गर्दछौं कि हाम्रो कार्डिएक सरकोडोसिस रिसर्चले जेम्सको जस्तै अधिक मृत्युलाई रोक्छ।
केविन रस,39 र तीन जना छोराछोरीका पिता, सरकोडोसिसको मृत्यु भयो। तिनका सासूले लन्डन मराथन भागे र उनको नाममा 10,000 भन्दा बढी पाउनुभयो। हाम्रो अनुसन्धानले यसको पङ्क्तिमा सरकोडोसिस रोक्नको उद्देश्य राख्दछ।
अब नामाकरण गर्नुहोस्
हाम्रो दान प्रतिबद्धता: SarcoidosisUK ले तपाईंको दान 20 लाई प्रयोग गर्नेछth सरकोडोसिसमा मेडिकल रिसर्च कोषको लागि सालगिरह अभियान। हाम्रो उद्देश्य एमटीओआर ब्लकर्सको मानव परीक्षणमा अनुसन्धान कोष को लागि यस अभियान को दान को उपयोग गर्न को लागी छ, यस शोध को यस क्षेत्र को सर्कोडोसिस को उपचार को लागी सबै भन्दा अधिक वादा को दर्शािन्छ। ब्रिटिश फेफड़े फाउन्डेशनको साथमा, जो समर्पित अनुसन्धान टोली र प्रक्रिया छ, एक अनुसन्धान प्रस्ताव चयन गरिने छ हाम्रो वित्त पोषण। SarcoidosisUK निर्णय समितिमा सिटहरू राख्छन् र हामीसँग अन्तिम भिटो छ। हाम्रो प्रतिबद्धता सधैँ सरकोडोसिसमा सर्वश्रेष्ठ अनुसन्धान प्रस्तावहरू कोषमा राख्नको लागि छ, र एमटीओआर ब्लकर्समा प्रस्तावहरू अनुसन्धान गर्नु पर्छ सर्कोडोसिसक्यू र ब्रिटिश फेफड फाउन्डेशन द्वारा निर्धारित उच्च स्तरहरू पूरा गर्न 20 वटा प्रति दानth सालगिरह अभियान SarcoidosisUK सामान्य अनुसन्धान बजेटमा लागू गरिनेछ, र धनहरू अर्को सफल अनुसन्धान प्रस्ताव तिर जानेछ।
हामी तपाईंलाई सुन्न चाहन्छु। कृपया कुनै प्रश्नहरू, टिप्पणीहरू वा सुझावहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस्।